वेंटिलेशन मोहलत "tion O2": समीक्षा र विनिर्देशों
तपाईं चयन गर्ने निर्णय भने एक मोहलत यो उपकरण समीक्षा "O2 tion" पढ्न रोचक हुनेछ। प्रणाली एक inflow घरेलू वेंटिलेशन, घर वा अपार्टमेन्ट मा, कार्यालय मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जो छ।
संकुचित मोहलत बन्द खिडकियों संग कोठा को वेंटिलेशन प्रदान गर्दछ। यो साफ हावा भित्र जब लागू छ, अक्सिजन सार्थक भयो। कोठा एक मोहलत "O2 को 'tion स्थापित छैन भने - अपार्टमेन्ट लागि घरेलु बाध्य वेंटिलेशन, निर्माण को भित्र stifling हुनेछ, हावा फोहोर र अस्वस्थ र भारी श्वास छ।
तपाईं खुला Windows मार्फत कोठा हवादार भने, तपाईं ड्राफ्ट को समस्या, ग्याँस, धूलो, हल्ला र allergens को प्रवेश सामना गर्न सक्छौं। मोहलत "tion O2", समीक्षा ताजा र सफा हावा, प्रदान जो केवल अक्सर पर्याप्त मात्र सकारात्मक ग्यारेन्टी को, हल्ला, ड्राफ्ट र खराब पारिस्थितिकी प्रदान सुरक्षा।
कुनै पनि विशेष स्थापना बारे उपभोक्ता समीक्षा
मोहलत "tion O2", समीक्षा, स्थापना (प्रक्रिया को वर्णन, विशेष), आफ्नो काम सुरु गर्नु अघि जांच गर्नुपर्ने, अक्सर विधानसभा कदम लिन धेरै सानो समय कि सरल कारण लागि ग्राहकद्वारा चयन, को हेरफेर एक घण्टा बारेमा लामो थियो। यस मामला मा, तपाईं माटो वा धूलो को उद्भव संग चलान छैन, र बाहिर मरम्मत खत्म लागि पनि यी काम सम्भव छ बोक्नु।
तपाईं मोहलत स्थापना हुनुअघि "tion O2" (घरेलू हावा-जेट वेंटिलेशन) तपाईं आफ्नै को हेरफेर पूरा गर्ने निर्णय भने, यो गणना को मालिकको गर्नुपर्छ तर, त्यसपछि तपाईं सामान्य सिद्धान्तअनुसार निर्देशित हुनु आवश्यक छ। यसको प्रयोगकर्ता अनुसार, एक उपकरण 40 वर्ग वा कम मीटर को एक क्षेत्र मा पर्याप्त ठाउँ हुनेछ। कोठा मा नै समयमा4मानिसहरूलाई हुन सक्छ।
विशेषज्ञहरु रेडियेटर वा सञ्झ्याल छेउमा अर्को अवस्थित एक विन्डो देहली गर्न प्रणाली, माउन्ट सुझाव दिन्छौं। यो मोहलत समायोजित यी स्थानहरूमा ठाउँ खाली को सबै भन्दा ठूलो रकम कारण हो।
प्रयोगकर्ता आवास एक सानो आयाम, यसको उचाइ, चौडाइ छ र गहिराई 511 X 451 X 163 मिमी छ कि लिङ्कमा छ। जो बारेमा मोहलत "O2 'समीक्षा tion तपाईं लेखमा पढ्न सक्नुहुन्छ, र छत मा स्थापित गर्न सकिन्छ। सानो अपार्टमेन्ट को मालिक अनुसार, यो स्थान तिनीहरूलाई लागि सबै भन्दा राम्रो छ। यस मामला मा, तपाईं रिमोट नियन्त्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हीरा मा ड्रिलिंग मालिकको तपाईं मलबे, धूलो र माटो को घटना साथ चलाउन गर्छन् किन छैन जो एक भ्याकुम क्लिनर, रोजगार। अर्को चरणमा सेवन च्यानल हल्ला र इन्सुलेशन थर्मल बाहिर बाट, साथै बन्द बारहरू मा।
तपाईं अग्रिम पढ्न निर्णय भने एक मोहलत "tion O2", यो उपकरण को समीक्षा स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो आधुनिक पसलहरूमा द्वारा प्रस्तुत व्यापक दायरा बुझ्न, दायाँ छनौट गर्न अनुमति दिन्छ।
अन्तिम चरण मा, प्रणाली को मालिक द्वारा उल्लेख रूपमा, वेंटिलेशन हावा उपखाडी च्यानल जडान। एकै समयमा मालिकको को माउन्ट टेम्पलेट र फास्टनरों, प्याकेजमा समावेश छन् जो प्रयोग गर्नुहोस्। प्रणाली वोल्ट 220 को एक आउटलेट भोल्टेज जोडिएको छ।
मोहलत "tion O2", परम्परागत वातानुकूलन संग तुलना अक्सर आपूर्ति, उपभोक्ताहरु छ जो को प्रयोग मा निर्देश। तर, प्रयोगकर्ता कि आफ्नो गुणस्तर विशेषताहरु impressively प्रत्येक अन्य फरक दाबी गर्छन्। तसर्थ, उपकरण को नवीनतम संस्करण मात्र हावा, कि कोठा मा छ एक प्रयोग ठंडा गर्दछ। यो सडक मा छ जो वातानुकूलन एकाइ, केवल एक गर्मी एक्सचेंजर, एक प्रशंसक छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। मोहलत फरक यो खुसीले गदगद हावा जनता खाली, र त्यसपछि कोठा मा उनलाई खुवाउने, बाहिर बाट ताजा हावा दिन्छ भन्ने छ। भवन भित्र सहज microclimate सिर्जना गर्न, तपाईंले वातानुकूलन र अग्रानुक्रम मा एक मोहलत, जो प्रत्येक अन्य पूरक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
मोहलत "तपाईंलाई थाहा रुचि हुनेछ O2 'विनिर्देशों, पनि हावा क्लीनर र हावा डूब संग तुलना को tion। यहाँ तपाईं वास्तवमा निहित जो हावा क्लीनर घर भित्रका वजन सवारी समान आधारभूत गुणहरू, चयन गर्न सक्नुहुन्छ, तर झ्याल कोठा बन्द हुन्छ जब एकदम stuffy हुनेछ।
तपाईं मोहलत र humidifier बीच चयन गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं बाहिर जनता आपूर्ति द्वारा कोठा भित्र हावा को चिस्यान पत्र सक्षम छ, जो पहिलो विकल्प, तिर दुबला गर्नुपर्छ। को humidifier संवाददाता सूचक को स्तर उठाउनु गर्न सक्षम छ, तथापि, यस stuffiness सामना गर्न सक्षम छ। यदि बाहिर हावा चिस्यान सँगै डाटा, मालिकको लागि निकै कम छ यो एक humidifier उपकरण प्रयोग गर्न सम्भव छ।
प्रयोगको लागि सिफारिसहरू
मोहलत "tion O2", तपाईं आफ्नो रुचि भ्कुकावट उपकरण को दिशा मा निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ प्राविधिक विशेषताहरु जो, यो घडी प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। कोठा मा मान्छे, निरन्तर कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन किनभने यो छ। उपकरण असक्षम मात्र मालिकहरूको लामो समयसम्म अभाव अवधिका लागि सिफारिस गरिएको छ।
अपार्टमेन्ट र निजी घरहरू मालिक पनि अक्सर धेरै एकाइहरु निर्माण भित्र हुनुपर्छ कसरी रुचि राख्नुहुन्छ। तपाईं समकोण 01/31/2003 पालना भने, त्यसपछि एक व्यक्ति प्रति घण्टा ताजा हावा को 30 घन मीटर हुनुपर्छ। को वर्णन उपकरणको प्रदर्शन सक्रिय अवधि प्रति 120 घन मीटर छ। यो एक बिरूवा 40 वर्ग मीटर को एउटै कोठामा भएका चार मानिसहरूलाई ताजा हावा प्रदान गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने संकेत गर्छ।
बाहिर स्थापना पूरा गर्न जसले हीरा ड्रिलिंग सतहहरु को कौशल र ज्ञान अधिकार योग्य पेशेवरों समावेश गर्न सिफारिस गरिएको छ। तपाईं एक भवन जसको मोहरा पृथक छ मा उपकरण स्थापना गर्न आवश्यक छ भने, त्यसपछि स्थापना चालक रोक्न अग्रिम यो सिफारिस गरिएको छ। यो खाडल गरिन गर्न मोहरा को टाइल वेंटिलेशन मा, तर पनि पर्खाल मा मात्र छैन भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
धेरै ducts को प्रयोग को सुविधाहरू
तपाईं एक मोहलत "tion O2 मानक» प्रयोग गर्ने निर्णय भने, समीक्षा मात्र चयन संग स्थापना गर्न मद्दत, तर पनि हुनेछ। तपाईं यसलाई सम्भव छ तर यस्तो काम उत्पादन ducts एक नम्बर मार्फत सडक संग उपकरण जडान गर्न आवश्यक छ भने, तर प्रदर्शन अनुसार केही मापदण्डहरु संग फरक हुनेछ। यसरी, 0.5 मीटर को एक पाइप, 90 डिग्री, 10% को प्रदर्शन मा कमी को एक मोड्नु छ जो गोडा, गोलाकार भने। माथिको किरा एउटा सीधा जडान कोण थप्न भने, कमी 15% हुनेछ। थप आयताकार पाइप जसको लम्बाइ एक मीटर बराबर छ द्वारा 20% घट्यो प्रदर्शन गर्न नेतृत्व गर्न थप्ने।
परिवर्तन फिल्टर लागि सिफारिसहरू
तपाईंले प्रयोग गरिनेछ "tion O2" मोहलत भने, यस प्रकारका घरेलू वेंटिलेशन निर्माण भित्र जलवायु को सबै समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। तर हामी एकदम सजिलै गरिन्छ कि फिल्टर को समसामयिक प्रतिस्थापन बिर्सनु हुँदैन। यो एकाइ को मर्मतका धेरै सरल छ र यसलाई व्यवसायीक को मद्दत मुछिएको बिना स्वतन्त्र गर्न सकिन्छ।2मिनेट भन्दा कुनै थप हुनेछ प्रक्रिया परिवर्तन गरेर। र आधारभूत फिल्टर र सोखना-catalytic हुन प्राप्त गर्न।
प्रणाली घटक को सुविधाहरू
breathers को समीक्षा "tion O2" अक्सर सान्दर्भिक माल को पसलहरुमा वातानुकूलन प्रणाली को एक विशाल श्रेणी प्रतिनिधित्व किनभने उपभोक्ताहरु, दायाँ छनौट गर्न मद्दत गर्छ। खरिद गर्नु अघि तपाईंले तत्व र आफ्नो विशेषताहरु संग आफैलाई familiarize गर्नुपर्छ। यसरी, हावा सेवन एक सजावटी भूमिका मात्र होइन कार्य, तर पनि कीरा र rainwater विरुद्ध सुरक्षा। थर्मल इन्सुलेशन संग हावा सेवन वाहिनी भित्र बाहिरी हावा गुणस्तर लागि जकडन सुनिश्चित गर्दछ। यो तत्व को शरीर सम्मिलित इन्सुलेट सामाग्री जो पर्खाल निर्माण को चिसो रोक्छ छ। अन्य कुराहरु, यो वाहेक हल्ला अलग प्रदान गर्दछ। एयर वाल्व inwardly बाहिर हावा को ingress समाप्त जो साधन बन्द हुँदा एक सुरक्षा तत्व, गर्दछ। यो तत्व actuator छ - जब प्रशंसक मा बन्द वाल्व बंद जबकि, यस वाल्व खोल्ने चालू।
फिल्टर विशेषता र हीटर
मोहलत "tion O2" (घरेलू आपूर्ति वेंटिलेशन आवास) बाहिर हावा शुद्ध डिजाइन फिल्टर बनेको छ। यस मामला मा, तपाईं कोठा भित्र जलवायु भाइरस, हानिकारक ग्याँसहरु, माइक्रो-जीव र Fungi को devoid छ भन्ने तथ्यलाई मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रणाली एक चिसो अवधिमा बाहिर हावा लागि ताप निमित्त जो एक हीटर समावेश छ। यो घटक स्वतः बाहिर बाट आउने हावा को तापमान समायोजित कि जलवायु नियन्त्रण जोडिएको छ। तपाईं एक मोहलत "tion O2" (कार्यालय लागि घरेलू हावा-जेट वेंटिलेशन) प्रयोग गर्नेछ भने, तपाईं कोठा निरन्तर कारण जलवायु नियन्त्रण उपस्थितिको एक निश्चित तापमान कायम भित्र हुनेछ के गणना गर्न सक्नुहुन्छ।
सुविधा र प्रशंसक नियन्त्रण प्रणाली
वेंटिलेशन मोहलत "tion O2", अन्य कुराहरु, एक प्रशंसक छ। यो तत्व भवन मा बाहिर हावा जबरजस्ती सुनिश्चित गर्दछ। त्यहाँ एक मोहलत नियन्त्रण प्रणाली, जो बन्द प्रशंसक स्विच, र हावा वाल्व नियन्त्रणमा समावेश छ।
Paronit पाना: आकार, वजन, स्कोप र विनिर्देशों
ग्याँस मीटर सेट लागि नियम। प्रति को मस्यौदा माथि सेट मा चरण निर्देशनहरूको द्वारा चरण
टांका फलाम DREMEL र यसको सुविधाहरू
परिवारको लागि एक हप्ताको लागि अर्थव्यवस्था मेनु। हप्ताको लागि धितो मेनु कसरी बनाउने
मंगल, ग्रह गरेको विशेषताहरु के छ। मंगल दूरी
ढिलाइ महिनावारी लागि कारण।
"21 औं सताब्दी", सेन्ट पीटर्सबर्ग डाक्टर, सेवा, ठेगाना चिकित्सा क्लिनिक र समीक्षा
स्वतन्त्रता-मायालु केटालोनिआ: स्वतन्त्रता वा चकमा?
"म मान्छे घृणा!" पोज वा psychopathology?
अद्वितीय फूल salpiglossis: बीउ बाट बढ्दै
एक्वैरियममा कस्तो तापमान हुनुपर्छ र यसलाई कसरी राख्ने?
"बिन" - विशेषज्ञहरु र उपभोक्ताहरूको टिप्पणी